Somalia :Uganda oo ciidamo Dheeraad ah usoo dirtay dalka Soomaaliya
Home Somali News East Africa Somalia :Uganda oo ciidamo Dheeraad ah usoo dirtay dalka Soomaaliya
Dowladda Uganda ayaa shaaca ka qaaday in dalka Soomaaliya ay u soo dirtay ciidamo milatari oo tiradooda ay kor u dhaafayso 2,000 oo askari kuwaa oo qayb ka noqonayo howlgalka AMISOM ee ka socdo gudaha dalka Soomaaliya.
Taliyaha ciidanka xooga ee dalka Yugaandha Gen. David Muhoozi iyo madaxwayne Yuweeri Muzevani ayaa ka qayb galay xaflad sagootin ahayd oo loo sameynayay ciidamada ka tirsan Uganda ee u soo baqoolay dhinaca dalka Soomaaliya.
Ciidamada cusub ayeey ku sheegtay dowladda ugandha in ay xoojin doonan howlgalka AMISOM oo ciidanka dowladda Soomaaliya gacan ka siinayo dagaalka ka dhanka ah Alshabaab.
Sidoo kale dowladda Uganda ayaa intaasi ku dartay in ciidamada cusub ee dalkeeda ka socdo ay qayb ka yihiin kuwa Boolis ah oo tiradooda ay gaarayso ilaa 13 sarkaal kuwaa oo oo cashiro iyo tababaro aqoon kordhin ah siin doono booliska Yugaandha ee ku sugan gudaha dalka.
Dowladda Yugandha ayaa qayb ka ah tiro wadama ah oo ciidamadooda u soo diray gudaha dalka Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan howlgalka Midawga africa AMISOM, kaasi oo ujeedkiisa uu yahay in ay taageeran ciidanka dowladda Soomaaliya oo la dagaalaya Alshabaab.